घर - भिसा सहयोगी
English العربية اردو हिन्दी Español Shqip Afrikaans አማርኛ Հայերեն Azərbaycan dili Euskara Беларуская мова বাংলা Български Bosanski 简体中文 繁體中文 Català Cebuano Chichewa Čeština‎ Hrvatski Nederlands Frysk Filipino ქართული ગુજરાતી Ελληνικά Kreyol ayisyen Harshen Hausa Magyar עִבְרִית Igbo Bahasa Indonesia 日本語 Қазақ тілі ಕನ್ನಡ ភាសាខ្មែរ 한국어 كوردی‎ Кыргызча ພາສາລາວ Latviešu valoda Lietuvių kalba Bahasa Melayu മലയാളം Maltese Te Reo Māori मराठी Монгол Македонски јазик Malagasy ဗမာစာ नेपाली پښتو ਪੰਜਾਬੀ فارسی Polski Português Русский Română Српски језик Shona سنڌي Sesotho Kiswahili Basa Sunda Afsoomaali Slovenčina Slovenščina සිංහල Türkçe ไทย Тоҷикӣ தமிழ் తెలుగు Українська O‘zbekcha Tiếng Việt isiXhosa Yorùbá Zulu
नमस्ते, हामी तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्न सक्दछौं?
अद्यावधिक: अमेरिकी दूतावासहरू फेरि खुल्दै छन्। भिसा सहयोगीले आप्रवासन र यात्रा को बारे मा कुनै अपडेट को लागी COVID-19 महामारी को निरीक्षण गर्न जारी राख्छ।
छिटो र सजिलो अमेरिकी भिसा कसरी पाउने सिक्नुहोस्।
कसरी यो काम गर्दछ
हामीलाई किन विश्वास गर्नुहोस्
भिसा सहयोगी नेटवर्कमा शामिल हुनुहोस्
एक अमेरिकी भिसा प्राप्त गर्नुहोस्, कुनै समस्या बिना।
हाम्रो प्लेटफर्मको शक्तिशाली उपकरणहरू, क्विजहरू र बुझ्ने सजिलो गाइडहरूले तपाईंको अमेरिकी भिसा र इमिग्रेशन यात्राको माध्यमबाट तपाईंलाई समर्थन गर्दछ, हरेक पाइला।
सिक्नुहोस् कसरी प्रवास गर्न र भिसा सहयोगीको साथ यात्रा गर्न!
ग्रीन कार्ड लोटरी भिसा
संस्कृति विनिमय भिसा
संसारको पहिलो सबै एक मा भिसा प्लेटफार्म।
अमेरिकी भिसाका लागि स्वीकृत हुनु कुनै सजिलो काम होइन।
त्यहाँ धेरै जटिल चरणहरु को माध्यम बाट जाने को लागी, अनलाइन संसाधनहरु को एक अनन्त भूलभुलैया, र यो तपाइँको आफ्नै बाहिर बाहिर लगाउन भारी हुन सक्छ।
यसैले हामीले भिसा सहयोगी बनायौं; तपाईंको एक स्टप-शप अनलाइन भिसा र अध्यागमन स्रोत केन्द्र।
चाहे तपाई यु.एस. भिसाका लागि आवेदन दिन लाग्नु भएको छ वा तपाईले पहिल्यै नै आवेदन गरिसक्नु भएको छ र कतै अड्किएको छ - हाम्रो प्लेटफर्मका गाईडहरू, क्विजहरू, र उपकरणहरूले तपाईंको भिसा अनुमोदन गर्नका लागि चरणहरूको माध्यमबाट मार्गनिर्देशन गर्दछन्, छिटो।
तपाईंको देश छान्नुहोस्।
हाम्रो प्लेटफर्मले अमेरिकी भिसा र इमिग्रेसन जानकारी विशेष देशहरूको लागि अनुकूल दिन्छ।
तल तपाईंको देश चयन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यदि हामीसँग तपाईंको राष्ट्रियताका लागि मार्गनिर्देशनहरू, संसाधनहरू र सूचनाहरू छन् कि छैनन्!
तपाई कुन देशबाट हुनुहुन्छ अल्बानिया अल्जेरिया अङ्गोला अर्जेन्टिना आर्मेनिया अजरबैजान बहराइन बंगलादेश बेलारुस बेनिन भूटान बोलिभिया बोस्निया र हर्जेगोविना बोत्स्वाना ब्राजिल बुर्किना फासो ब्रुनाई बुल्गेरिया केप वर्ड कम्बोडिया क्यामरुन चाड चीन कोलम्बिया कोट डी'आइवर कोस्टा रिका क्रोएशिया क्युबा डोमिनिकन गणतन्त्र इक्वेडर मिश्र एल साल्भाडोर इरिट्रिया इथियोपिया गावोन गाम्विया जर्जिया घाना ग्वाटेमाला गिनी Honduras हङकङ भारत इन्डोनेशिया इरान इराक इस्राएलका जमाइका जोर्डन काजाकिस्तान केन्या कुवेत किर्गिस्तान लाओस लेबनान लिबिया म्यासिडोनिया मालवी मलेसिया माली Mauritius मेक्सिको माल्डोवा मोनाको मङ्गोलिया मोन्टेनेग्रो मोरक्को मोजाम्बिक नामिबिया नेपाल निकारागुवा नाइजर नाइजेरिया ओमान पाकिस्तान प्यालेस्टाइनमा पानामा प्यारागुवा पेरु फिलिपिन्स कतार रोमानिया रूस रवांडा साउदी अरब सेनेगल सर्बिया सियरा लियोन सिंगापुर सोमालिया दक्षिण अफ्रिका श्रीलंका सुडान ताजिकिस्तान तान्जानिया थाईल्याण्ड टोगो टुनिशिया टर्की तुर्कमेनिस्तान युगान्डा युक्रेन संयुक्त अरब एमिरेट्स उरुग्वे उज्बेकिस्तान भेनेजुएला भियतनाम यमन जाम्बिया जिम्बाब्वे संयुक्त राज्य अमेरिका
-अनलाइन भिसा यात्रा-
30 मिनेट भन्दा कम मा एक अमेरिकी भिसा को लागी आवेदन गर्न को लागी जान्नुहोस्।
तपाइँ तपाइँको भिसा सम्बन्धी प्रश्नहरुको उत्तर दिन को लागी जानकारी मा डूबने घण्टा खर्च गर्नु पर्दैन।
हाम्रो अनलाइन भिसा यात्रा उपकरण सरल धेरै विकल्प छनौट प्रश्नहरु को उपयोग गर्दछ कि छिटो साँच्चै साँच्चै संकुचित जहाँ तपाइँ तपाइँको भिसा वा आप्रवास यात्रा मा हुनुहुन्छ।
तपाइँका प्रतिक्रियाहरूको आधारमा, भिसा सहयोगी तपाइँको विशेष मार्गनिर्देशनहरू र अनुकूलित जानकारी ल्याउँछ तपाइँको भिसा आवेदन साथ सार्न क्रमशः तपाइँको पालना गर्न आवश्यक छ।
मिनेटमा तपाईको अर्को चरणहरू योजना गर्नुहोस्।
हाम्रो मार्गनिर्देशनहरूले जटिल भिसा र इमिग्रेशन शीर्षकहरू सरल, बुझ्न-सजिला चरणहरूमा विभाजित गर्दछ।
प्रत्येक गाईडले अप-टु-डेट जानकारी समावेश गर्दछ जुन केवल तपाईंको व्यक्तिगत परिस्थिति र मूल देशसँग सम्बन्धित छ।
केही मिनेटमा, तपाईं हाम्रो गाईडहरू पढ्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको अर्को चरणहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तुरुन्त कदम चाल्नुहुनेछ।
- भिसा योग्यता टेस्ट-
भिसा पाउने सम्भावनाहरूको भविष्यवाणी गर्नुहोस्, तपाईंले आवेदन गर्नु अघि।
हाम्रो भिसा योग्यता परिक्षण तथ्या .्क अनुसार चालित उपकरण हो जसले अमेरिकी भिसा सफलतापूर्वक प्राप्त गर्ने तपाईको अड्कलहरूको भविष्यवाणी गर्न सक्छ।
उपकरण तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीको साथ कारक तपाईंको देश र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको वर्तमान सम्बन्ध।
तपाईको सम्भाव्यता स्कोरको आधारमा, तपाईले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको समय, पैसा र भिसाका लागि आवेदन दिन प्रयास गर्ने जोखिम।
-विशेषज्ञहरु संग सहयोग-
जोखिम-मुक्त, तपाईका लागि भिसा अनुप्रयोगहरूको लागि।
हाम्रो प्लेटफर्म मा साइन अप तपाइँ विशेषज्ञ भिसा र आप्रवासन वकीलहरु, साथै विश्वसनीय भिसा प्रशोधन पेशेवरहरु को लागी तपाइँको भिसा आवेदन तपाइँको लागी गर्न को लागी विशेष पहुँच प्रदान गर्दछ।
प्रत्येक पार्टनरको क्रेडेन्सियल र प्रतिष्ठा होशियारीका साथ जाँच गरीएको छ कि तपाई आफ्नो भिसा केसमा सहयोग पुर्‍याउन सबै भन्दा राम्रो साझेदारसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ।
1. साइन अप गर्नुहोस्
सानो प्लेटफर्म भुक्तानीको साथ दर्ता गरेर हाम्रो प्लेटफर्ममा पूर्ण पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्।
२. भिसा प्रश्नावली
हाम्रो प्लेटफर्मलाई कम गर्न मद्दतको लागि सरल बहु-विकल्प प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् तपाईंको भिसा वा आप्रवास यात्रामा तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ।
Action. कार्य लिनुहोस्
सान्दर्भिक, निजीकृत भिसा गाईडहरू पाउनुहोस्, हाम्रो भिसा योग्यता परीक्षाको साथ भिसा प्राप्त गर्ने संभावनाहरूको अनुमान लगाउनुहोस् र प्रमाणित 3rd-पार्टी साझेदारीमा सहकार्य गर्नुहोस्।
$ 25 कुल।
अनलक पूर्ण जीवन भरि केवल $ २ USD अमेरिकी डलरको एक पटकको लगानीको साथ भिसा हेल्परमा पहुँच गर्नुहोस्।
भिसा हेल्पर प्लेटफर्ममा पहुँच
आप्रवासन वकील र भिसा प्रोसेसर को लागी पहुँच
भिसा योग्यता परीक्षण उपकरण
अप-टू-डेट भिसा गाइड
अनलाइन संसाधन र ब्लगहरू
समर्पित ग्राहक समर्थन
महँगो अनुप्रयोग गल्तीहरूको बिरूद्ध सुरक्षा गर्नुहोस्
तपाईंको भिसा आवेदनमा गल्तीले महिनौं - वा वर्ष सम्म पनि स्वीकृति ढिलाइ गर्न सक्दछ।
जब तपाईं भिसा सहयोगीका लागि साईन अप गर्नुहुन्छ, तपाई आफैले सबै कुराको अनुसन्धान नगरी समय बचत गर्नु हुन्छ, तपाईसँग सहयोगी हात पनि हुनेछ जुन तपाईलाई महँगो अनुप्रयोग गल्ती गर्नबाट बचाउँछ।
हाम्रो ग्राहकहरु के भन्छन्:
म मेरो पतिलाई एक Spousal भिसाका लागि साउदी अरेबियाबाट बाहिर ल्याउन के गर्ने भनेर ठ्याक्कै जान्न सकें। यो प्लेटफर्म प्रयोग गर्न एकदम सजिलो छ! यसले मलाई १० मिनेट भन्दा कम समय लगायो र मलाई लागु कसरी आवेदन गर्ने। म पर्याप्त भिसा सहयोगीलाई धन्यवाद दिन सक्दिन!
रसियामा अमेरिकी दूतावाससँग सम्झौता गर्न गाह्रो थियो, हामीलाई हाम्रो मंगेतर भिसामा धकेल्न के गर्ने भनेर थाहा थिएन। अब हामी भिसा सहयोगीको कारणले गर्दा हाम्रो सबै चरणहरू बारे जान्न सक्ने सबै कुरा जान्दछौं! तिनीहरू सबै कुरा जान्न यति सजिलो बनाउँदछन्। मेरी श्रीमतीले उनको भिसा हातमा लिएकी छ र मसँग संयुक्त राज्य अमेरिकामा।
भिसा सहयोगीले म र मेरी श्रीमतीको जीवनलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्‍यो। म कुन किसिमको भिसा चाहिन्छ भनेर बुझ्न म सक्षम थिए, प्रक्रिया, र प्रत्येक चरण हामीले हाम्रो Spousal भिसा पाउनु पर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न। जोसुकैले पनि आप्रवासनको मामिलामा संघर्ष गरिरहेकाहरुलाई भिसा सहयोगी प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछु।
म भर्जिनियाको मेरो सपना विश्वविद्यालयमा स्वीकृत भयो! मसँग आफैंमा लागु गर्न समय वा ज्ञान थिएन तर भिसा सहयोगीले यसलाई धेरै सरल बनायो। १ दिन भन्दा कममा म एक छात्र भिसाको लागि आवेदन दिन सक्षम थिए।
भिसा सहयोगी नै मेरो सानो भाई वर्षौंको प्रतिक्षा पछि संयुक्त राज्य आउन सक्नुको कारण हो। म निर्धक्क थिएँ र प्रणाली कसरी नेभिगेट गर्ने भन्ने बारे मलाई केही पनि थाहा थिएन, भिसा हेल्परको प्रयोग गरेर म हाम्रो केसमा हामीलाई सहयोग गर्नका लागि एक वकिलसँग सम्पर्कमा रहें। भिसा सहयोगीलाई धेरै माया!
मेरी श्रीमती years बर्षे अन्तमा अमेरिकामा विवाह भिसाको लागि कसरी आवेदन दिन सकिन्छ भन्ने अनुसन्धान गरेर बिताए पछि अमेरिका आइपुगिन्। भगवानलाई धन्यवाद, मैले भिसा सहयोगी पाए। तिनीहरूको भिसा गाईडहरू बुझ्न र अनुसरण गर्न सजिलो छ। म यी सबै चीजको लागि .णी छु, धन्यवाद।
हाम्रो समाचार सदस्यता
प्राप्त गर्नका लागि साइन अप गर्नुहोस् (साप्ताहिक) न्यूजलेटर अपडेटहरू तपाईंको इनबक्समा सिधा बुझाइयो।
तपाईंको गोपनीयता हाम्रो प्राथमिकता हो। सबै मेलिंग जानकारी कडाईका साथ गोप्य राखिन्छ। तपाईं कुनै पनि समयमा सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कसरी GDPR को अनुपालनमा तपाइँको निजी जानकारी संकलन, राख्ने, र प्रसोधन गर्ने बारेमा जान्नको लागि, कृपया हाम्रो अवलोकन गर्नुहोस् गोपनीयता नीति.
अमेरिकाले प्रदान गरेको सेवाहरू, सामग्री र विश्लेषण विश्लेषणात्मक कानुनी सल्लाह होइनन् र मात्र सूचना प्रयोजनहरूका लागि हुन्। तपाईंले कुनै खास मुद्दा वा समस्याको सम्बन्धमा आदरका साथ सल्लाह मानेर आफ्नो सम्पर्क सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। वेबसाइटको उपयोग र पहुँचले कुनै पनि विश्वास-क्लाइन्ट, वा सिमिलर सम्बन्ध सम्बन्ध सिर्जना गर्दैन।
१२123 राजा आर.डी. वेस्ट स्ट्रीट, शहर १२1234।
+ 1 (123) 456-7890
हामीसँग जडान गर्नुहोस्!
प्रतिलिपि अधिकार © २०२० भिसा सहयोगी - सबै अधिकार सुरक्षित
वेबसाइटलाई राम्रोसँग काम गर्नको लागि आवश्यक कुकीहरू पूर्ण रूपमा आवश्यक छन्। यी कुकीजले बेनामी कार्यक्षमता र वेबसाइटको सुरक्षा सुविधाहरू, अज्ञात रूपमा सुनिश्चित गर्दछ।
कूकीलाविनफो-चेकबक्स-एनालिटिक्स 11 महिना यो कुकी GDPR कुकी कन्जिन्ट प्लगइन द्वारा सेट गरिएको छ। कुकीको "विश्लेषक" कोटिमा कुकिजका लागि प्रयोगकर्ताको सहमति भण्डार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
cookielawinfo-checbox- कार्यात्मक 11 महिना कुकी GDPR कुकी सहमति द्वारा सेट गरिएको छ "फंक्शनल" कोटिमा कुकिजका लागि प्रयोगकर्ताको सहमति रेकर्ड गर्न।
कूकीलाविनफो-चेकबक्स-अन्य 11 महिना यो कुकी GDPR कुकी कन्जिन्ट प्लगइन द्वारा सेट गरिएको छ। कुकी अन्य "कोटी" वर्गमा कुकिजका लागि प्रयोगकर्ताको सहमति भण्डार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कूकीलाविनफो - चेकबक्स-आवश्यक 11 महिना यो कुकी GDPR कुकी कन्जिन्ट प्लगइन द्वारा सेट गरिएको छ। कुकीहरू "आवश्यक" कोटिमा कुकिजहरूको लागि प्रयोगकर्ताको सहमति भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कूकीलाविनफो-चेकबक्स-प्रदर्शन 11 महिना यो कुकी GDPR कुकी कन्जिन्ट प्लगइन द्वारा सेट गरिएको छ। कुकी प्रदर्शनको लागि "प्रदर्शन" कोटिमा कुकिजका लागि प्रयोगकर्ताको सहमति भण्डार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
हेरिएको_कुकी_पलिसी 11 महिना कुकी जीडीपीआर कुकी कन्सेन्ट प्लगइन द्वारा सेट गरिएको हो र भण्डार गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ जुन प्रयोगकर्ताले कुकीजको प्रयोगमा सहमति जनाएको छ वा छैन। यसले कुनै पनि व्यक्तिगत डाटा भण्डार गर्दैन।
सेवाहरू, सामग्री, र अमेरिका द्वारा प्रदान गरिएको विश्लेषण कानूनी सल्लाह होईन र सूचनामूलक उद्देश्यहरूको लागि मात्र हो र कानुनी सल्लाह वा तपाईंको सूचनाको स्रोतको रूपमा भरोसा हुनुहुँदैन। कुनै विशेष मुद्दा वा समस्याको सम्बन्धमा सल्लाह प्राप्त गर्नका लागि तपाईंले आफ्नो वकीललाई सम्पर्क गर्नुपर्छ। वेबसाइटको उपयोग र पहुँचले कुनै पनि वकील-ग्राहक सम्बन्ध सिर्जना गर्दैन। वेबसाइटमा व्यक्त विचार र विश्लेषणहरू अपूर्ण छन् र केवल सूचनाको उद्देश्यका लागि मात्र। यद्यपि वेबसाइटमा प्रदान गरिएको डेटा विश्लेषण विश्वसनीय र स्रोतहरूको स्रोतबाट उत्पादित र प्रशोधन गरिएको छ, हामी कुनै पनि बनाउँदैनौं र तपाईं कुनै पनि वारेन्टीमा निर्भर हुनुहुन्न, अभिव्यक्त वा निहित हुनुहुन्न, शुद्धता, पर्याप्तता, पूर्णता, वैधानिकता, विश्वसनीयता, वा यसमा समावेश कुनै पनि जानकारीको उपयोगिता। कुनै पनि परिस्थितिमा साइटको प्रयोग वा साइटमा प्रदान गरिएको कुनै पनि जानकारीमा निर्भरताको परिणामका रूपमा हामीसँग तपाईंको कुनै प्रकारको दायित्व हुनेछैन। तपाईंको साइटको प्रयोग र साइटमा कुनै पनि जानकारीमा तपाईंको निर्भरता तपाईंको आफ्नै जोखिममा छ।
भिसा सहयोगीमा सामेल हुनुभएकोमा धन्यवाद! यो वेबसाइट भिसा र यात्राको बारेमा कन्फ्युजन हटाउन डिजाइन गरिएको हो जुन तपाईंलाई आवश्यक जानकारी देखाउँदै। कुन भिसासँग सान्दर्भिक प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् जुन तपाईलाई या त सहयोग चाहिन्छ वा आवेदन दिन चाहान्छ। यी प्रश्नहरूको उत्तर आवेदकको दृष्टिकोणबाट बुझाउनुहोस् (एक जो भिसाका लागि आवेदन गर्दैछ।) यदि तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुनुहुन्छ र कसैको तर्फबाट हाम्रो सेवाहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, प्रासंगिक छनौटहरू उनीहरूले आउने बित्तिकै छनौट गर्नुहोस्। माथि यदि तपाईंलाई सहयोग चाहिएमा, समर्थन बटन चयन गर्नुहोस् र हामीलाई तपाईंको छानबिन पठाउनुहोस्।
तपाईले यस भिसाका लागि अझै आवेदन दिनुभएन, चिन्ता छैन! पहिले, हामी तपाइँले भिसा योग्यता टेस्ट लिन चाहन्छौं। यो क्विज आवेदक (भिसाका लागि आवेदन दिने व्यक्ति) सम्बन्धी केहि प्रश्नहरूको उत्तर दिएर तपाईलाई यो भिसा प्राप्त गर्ने सम्भावना देखाउन डिजाइन गरिएको हो। यो आवेदकको देश र लक्षित देश बीचको राजनीतिक, आर्थिक, र सुरक्षा सम्बन्धको वास्तविक समय डाटा प्रयोग गरेर प्रगति गरिएको छ। यो परिक्षण पूर्ण रूपमा सहि हुनु हुँदैन; यसको एकमात्र उद्देश्य भनेको तपाईंलाई भिसा प्राप्त गर्ने अनुमान लगाउनु हो। कृपया नोट गर्नुहोस्, भिसा योग्यता परीक्षा मात्र सूचना प्रयोजनका लागि हो, कुनै पनि हिसाबले तपाईंले परिणामहरू अन्तिम निर्धारण कारकको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्न किनकि प्रत्येक भिसा केसलाई यसको योग्यताको आधारमा दूतावासमा व्यक्तिगत रूपमा ह्यान्डल गरिएको छ।
यहाँ तपाइँले जाँच गरिएको, इजाजतपत्र प्राप्त आप्रवासी वक्ताहरूको सूची भेट्टाउनुहुनेछ जसले भिसाका लागि आवेदन दिन वा तपाईको हालको अनुप्रयोगमा सहयोग पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। बायाँपट्टि रहेका फिल्टरहरू छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको भिसा केसमा लागू हुन्छ जो तपाईंको भिसा प्रकारमा विशेषज्ञता दिने वकिललाई संकुचित गर्दछ। तपाईं खोजी बारमा नाम द्वारा एक विशेष वकिलको लागि खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कुनै पनि प्रदायकको तालिम वा सीपको बारेमा कुनै प्रतिनिधित्व वा वारेन्टी गर्दैनौं। तपाईं अन्ततः योग्यताहरूको मूल्यांकन गर्न र तपाईंको विशेष प्रदायक छनौटको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। हाम्रा सेवाहरूको प्रयोग जारी राखेर, तपाईं वकिलको जानकारी कसैसँग पनि साझा नगर्न सहमत हुनुहुन्छ।
चूंकि आवेदकले भिसा को लागी आवेदन गरेको छैन, तपाइँ भिसा योग्यता परीक्षा लिनुहुनेछ। कृपया तपाइँको उत्तर संग ईमानदार हुनुहोस्। त्यहाँ अमेरिका भिसा प्रक्रिया को माध्यम बाट कुनै धोखा छैन, मात्र तपाइँ यस परीक्षण बाट लाभ उठाउनुहुन्छ। यो परीक्षण तपाइँ आवेदक को बारे मा केहि प्रश्नहरु को उत्तर दिएर यो भिसा प्राप्त गर्ने मौका देखाउन को लागी डिजाइन गरीएको हो (जो एक भिसा को लागी आवेदन दिइरहेको छ)। यो आवेदक को देश र संयुक्त राज्य अमेरिका को बीच राजनीतिक, आर्थिक, र सुरक्षा सम्बन्ध को वास्तविक समय डाटा को उपयोग गरेर प्रोग्राम गरीएको छ। यो परीक्षण बिल्कुल सही हुन को लागी मतलब छैन; यसको एकमात्र उद्देश्य तपाइँलाई भिसा प्राप्त गर्ने एक सन्निकटन दिनु हो। यो परीक्षण मात्र एक पटक लिन सकिन्छ। यदि तपाइँ एक फरक भिसा को लागी परीक्षा लिन रुचि राख्नुहुन्छ, तपाइँ एक नयाँ खाता बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाइँ फिर्ता जान सक्नुहुन्छ र माथिको "मेरो खाता" विकल्प अन्तर्गत तपाइँको नतिजा हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस्, भिसा योग्यता परीक्षा मात्र सूचना प्रयोजनहरु को लागी हो, कुनै पनी तरीकाले तपाइँ आवेदन को लागी अन्तिम निर्णायक कारक को रूप मा परिणाम को उपयोग गर्न को लागी प्रत्येक भिसा मामला दूतावास मा यसको योग्यता को आधार मा व्यक्तिगत रूपमा संभाला छ।
यहाँ तपाईं सबै भिसा गाइडहरूको लागि सूची पाउनुहुनेछ जुन तपाईंको देशको लागि निर्दिष्ट छ। तपाईंको देश ड्रप डाउनमा खोज्नुहोस्, त्यसपछि तपाईंले हेर्न चाहनुभएको भिसा गाइड चयन गर्नुहोस्। तपाईं यस पृष्ठमा "मेरो भिसा यात्रा" मा क्लिक गरेर फिर्ता जान सक्नुहुन्छ, त्यसपछि "कसरी आवेदन दिने" चयन गरेर।
यहाँ तपाईले जाँच गरेको तेस्रो पार्टी पार्टनरहरूको सूची भेट्टाउनुहुनेछ जुन तपाईले भिसाका लागि आवेदन दिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबै साझेदारहरू भिसा सहयोगीको मानदण्ड अनुसार जाँच गरीन्छन्। तपाईं यस पृष्ठमा पार्टनर क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ उनीहरूको वेबसाइटमा निर्देशित गर्न। तपाइँ कुनै पनि प्रदायकहरू वा सेवाहरू द्वारा उपलब्ध गराइएको जानकारीमा तपाइँको निर्भरता पूर्ण रूपमा तपाइँको आफ्नै जोखिममा छ र तपाइँ यससँग सम्बन्धित सबै जोखिमको लागि पूर्ण जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुहुन्छ।